AMISOM oo qiratey in dagaalada Muqdisho ay kaga dhinteen ku dhawaad 100-askari. – SBC
AMISOM oo qiratey in dagaalada Muqdisho ay kaga dhinteen ku dhawaad 100-askari.
Taliyaha ciidamada lugta Dowlada Uganda Jen Katumba Wamala oo ka hor hadlayay Barlamaanka wadankaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada AMISOM qasaare xoogan uu kasoo gaaray dagaaladii u danbeeyay ee Muqdisho ay kula galeen Al shabaab.
Wamala waxa uu tilmamay tan iyo bishii Febuary ee sanadkan howlgaladii u danbeeyay oo ciidamada AMISOM ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho ay kaga geeryoodeen 90-askari halka in kabadan boqol kalana uu tibaaxay in ay ku dhaawacmeen.
Waxa uu sheegay in inkastoo qasaarahaasi uu soo gaaray AMISOM hadana ay la wareegeen fariisimo muhim u ahaa Al shabaab oo ka tirsan Muqdisho waxana uu intaa ku daray in ay sii wadayaan gacan siinta Dowlada KMG
Dhinaca kale Todobadkan gudihiisa ayey aheed markii Dowlada Uganda ay shaaca ka qaaday in 4-kun oo askari ay usoo direyso Somaaliya si ay qeyb uga noqdaan ciidamada AMISoM